'Gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha Afrika oo aad hoos ugu dhacay' - BBC News Somali
11 Nofembar 2018
Lahaanshaha sawirka Image copyrightBARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES
Image caption Haweeney hablaha gudda iyo sakiintii ay adeegsan jirtay
Sida ay sheegtay daraasad dhawaan soo baxday, waxaa aad hoos ugu dhacay labaatankii sano ee u dambeeyey gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha Afrika lagu sameeyo.
Sida uu daabacay Wargayska BMJ Global Health, ee ka faallooda arrimaha caafimaadka, waxa uu xusay in "hoos u dhac aad u wayn" uu jiro oo la xiriira gudniinka fircooniga ah ee hablaha ka yar da'da 14 jirka.
Caadadan ayaa ah in la jarjaro oo meesha laga saaro qaybo kamid ah habdhiska taranka ee gabadha ama haweeneyda, oo uu kamid yahay kintirku.
Bulshooyinka qaar ayaa u arka in dhaqankan uu yahay lama dhaafaan, balse kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegaya in uu yahay bahalnimo iyo in uu jir ahaan yahay halis.
Xaaladda ugu daran ayaa ah, marka dadka ay waxyeelladu kasoo gaarto ay u dhintaan dhiig bax ama caabuq.
Waxaana dhacda in intaas ay u raacaan, xanuunno soo noqnoqda, dhalmo la'aan, dhibaatooyin dhanka caadada ah iyo sidoo kale halis caafimaad oo soo foodsaarta caruurta dhalanaysa.
Unicef, oo ah hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhallaanka, ayaa waxay qiyaasaysaa in 200 oo milyan oo haween ah oo kunool daafaha dunida lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah, inta badan haweenkaas ayaa kunool qayba kamid ah Afrika iyo Bariga Dhexe.
Tirada gudniinka celcelis ahaan
Ayagoo adeegsanaya xog lagasoo aruuriyey 29 dal kana soo bilaabaya sanadkii 1990-kii, dadka warbixinta qoray ayaa ogaaday in hoos u dhaca ugu badan ee kala dhantaallida xubnaha taranka ee haweenka uu kajiro Bariga Afrika.
Sida ay warbixintu sheegtay, intii lagu jiray sanadkii 1995-tii tirada gabdhaha gudniinka lagu sameeyo ee da'ahaan ka yar 14-ka sano ayaa celcelis ahaan ahayd 71%, halka sanadkii 2016-kii ay hoos ugu dhacday 8% oo kaliya.
Dalalka qaar tirada celcelisku ay aadka hoos ugu dhacday ayaa waxaa kamid ah - Kenya iyo Tanzania, halka 3-10% oo ah gabdhaha la ildaran gudniinka ay guud ahaan hoos u dhacday.
Nice Leng'ete Markii ay 8 jirka ahayd, Nice Leng'ete ayaa la damcay in la gudo balse way kadagaallantay.
Waqooyiga Afrikana, sanadkii 1990-kii celcelis ahaan tirada gabdhaha la gudo ayaa ahayd 60% halka 2015-kii ay gaartay 14% oo kaliya.
Galbeedka Afrika ayaa sidoo kale muujinaysa hoos u dhac aad u ballaaran,ayadoo sanadkii 1996 la gudi jiray 74% gabdhaha halkaas kunool, halka sanadkii 2017-dii la guday oo kaliya 25% gabdha halkaasi kunool.
Sidaas oo ay tahay, dadka u ol'oleeya ka hortagga gudniinka fircooniga ah ayaa arkaya in caruurta yar yar ay khatar ugu jiraan in la gudo, halka kuwa qaan gaarka ah iyo haweenka dhalinta yar loo guday gudniin fircooni ah - daraasadduna arrintaas kama aanaay hadlin.
"Aad Ayaan ugu faraxnanahay in aan aragno in tirada hablaha la gudo ee kunool dalal fara badan ay isdhimayso'' ayay tiri Emma Lightowlers, oo u hadasha koox u ol'olaysa la dagaallanka gudniinka fircooniga oo lagu magacaabo 28TooMany.
" Balse arrintu halkaa kuma eka oo kaliya waxaa jira kooxo kale oo ka wayn 14 jir oo wali la gudo".
Kooxda soo saartay warbixinta, oo ay ku jiraan saynisyanno fadhigoodu yahay Britain iyo Koonfur Afrika, ayaa xog u soo aruuriyey barnaamijka Demographic Health Survey iyo hay'adda Unicef, waxayna baadhitaan ku sameeyeen ku dhawaad 210,000 oo caruur ah.